Nbudata - Egwuregwu egwu zuru oke dị iche iche n'ahịa ahịa
Free premiom WordPress Themes Downloads + chat
Ịkụzi igwe na ọgụgụ isi niile PetrPikora.com ndebiri dị na Machine Learning and Artificial Intelligence, ha na-etinyekwa atụmatụ nwere ọgụgụ isi nke ga-enyere gị aka ibute saịtị gị
N'ọtụtụ kasị elu Studio Ultimate 22
Pinnacle na sklonku letních prázdnin představil novou verzi Pinacle Studio 22 snovo novinkami. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe na-eme ka a na-elebara gị anya, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ndị ọzọ
Egwu ibudata	 11.8.2018 11.8.2018
Akaụntụ MP3 Free Firefox - maka azụmahịa na nke na-abụghị nke azụmahịa. Zoo ya n'efu site na ịpị njikọ a. Ị nwere ike iji egwu n'efu, dịka ọmụmaatụ, na vidiyo vidio YouTube,
Ihe ntanetị nke Windows 10
Na-akwado Microsoft ngwa ngwa na ngwa ngwa nke Windows 10 usoro. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-eme ka a na-eme ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-eme ka gị na ndị ọzọ na-elebara gị anya, ọ ga-eme ka gị na ha na-adị ná mma.